तपाई मोटोपनले हैरान हुनुहुन्छ ? भान्सामै रहेका यस्ता चीज खानुहोस् हुनेछन!!! फाइदा – News Nepali Dainik
तपाई मोटोपनले हैरान हुनुहुन्छ ? भान्सामै रहेका यस्ता चीज खानुहोस् हुनेछन!!! फाइदा
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण १६, २०७७ समय: २१:३७:०१
काठमाडौं – धेरै मानिसहरु मोटोपनका कारण चिन्तित देखिन्छन् । अव्यवस्थित खानपान, विलासी जीवनले गर्दा धेरैमा मोटोपनको समस्या हुन्छ । मोटोपन भएमा पेट बढ्ने हुन्छ । मोटोपन भएका मानिसहरुलाई दुब्लाउन रहर हुन्छ ।
यदि तपाई पनि यस्तै समस्यामा हुनुहुन्छ भने यसको समाधानका उपायहरु हाम्रै भान्सामा छन् । भान्सामा रहेका केहि चीजहरु खादा शरिरमा मोटोपन कम हुन्छ ।
कागती – हाम्रो भान्सामा प्रयोग भइरहने कागती सेबन गर्नाले पनि मोटोपन कम गर्न सहयोग गर्छ । यसमा पाइने भिटामिन सी र फाइबरले मोटोपन कम गर्न सहयोग पुर्याउछ ।
कालो मरिच– हाम्रो भान्सामा पाइने कालो मरिचले पनि मोटोपन कम गर्न । आयुर्वेदका अनुसार यसको सेबनले तौल कम हुन्छ। यसले शरीरको ब्लोकेज घटाउँछ भने सर्कुलेशनलाई सुचारु राख्न सहयोग गर्छ । तौल कम हुन्छ ।
दालचिनी – भान्सामा सजिलै पाइने दालचिनीले पनि मोटोपन कम गर्न सहयोग गर्छ । आयुर्वेदमा दालचिनीको प्रयोग कीटाणुनाशक, दुखाइको कम गर्न प्रयोग गरिन्छ । दालचिनीले वजन कम गर्न सहयोग पुर्याउछ । यसमा हुने तत्पवले मेटाबोलिज्मलाई बढाउँछ भने ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउन छ ।
मह – हाम्रो भान्सामा हुने अर्को मिठो चीज हो मह । स्वादमा मात्र होइन मह खादा तौल घट्छ । यसमा हुने हार्मोनले भोक कम लगाउँछ भने तौल कम गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
भोजन कम गर्नु मोटोपन घटाउन दिनभरमा ४, ५ पटक गरेर थोरै थोरै भोजन गर्र्न सकिन्छ । कार्बोहाइड्रेडयुक्त खानाले मोटोपन घटाउने गर्छ । खानाभन्दा फलफूल, सागसब्जी खानु पर्छ । जंकफूड, प्रशोधित खानेकुरा, चिल्लोयुक्त भोजन कम गर्नुपर्छ ।
Last Updated on: February 28th, 2021 at 9:37 pm